Jehova kere ụwa a, nye ya ụmụ mmadụ ka ha biri. N’ihi ya, Chineke ekeghị Adam na Iv ka ha biri n’eluigwe. Kama, ọ bụ ndị mmụọ ozi ka o kere ka ha biri n’ebe ahụ. (Job 38:4, 7) Mgbe Chineke kechara Adam, o mere ka o biri na paradaịs, ebe mara ezigbo mma. A kpọrọ ebe ahụ ogige Iden. (Jenesis 2:15-17) Jehova chọrọ ka Adam na ụmụ ya biri n’ụwa ruo mgbe ebighị ebi.—Gụọ Abụ Ọma 37:29; 115:16.
Mgbe ahụ e kere Adam na Iv, ọ bụ naanị ogige Iden ahụ bụ paradaịs. Ma, Chineke chọrọ ka ha mụọ ụmụ mụjuo ụwa. Ka ha na-amụ ụmụ, ha ga-eji nwayọọ nwayọọ mee ka ụwa niile ghọọ paradaịs. (Jenesis 1:28) O nweghị ihe ga-eme ka Chineke bibie ụwa a. Ọ chọrọ ka ụmụ mmadụ biri na ya ruo mgbe ebighị ebi.—Gụọ Abụ Ọma 104:5.
Adam na Iv nupụụrụ Chineke isi, n’ihi ya, Chineke achụpụ ha n’ogige Iden ahụ. Otú ahụ ka paradaịs ahụ si kwaa ụmụ mmadụ. Kemgbe ahụ, o nwebeghị onye merela ka ụwa a ghọghachi paradaịs. Baịbụl kwuru, sị: “E nyefewo ụwa n’aka onye ajọ omume.”—Job 9:24.—Gụọ Jenesis 3:23, 24.
Ọ̀ pụtara na ihe niile gbasara ụmụ mmadụ ịdị ndụ ebighị ebi n’ime paradaịs otú ahụ Jehova chọburu ya agaghịzi enwe isi? Ọ bụghị ihe ọ pụtara. O nweghị ihe nyịrị Chineke. Ọ ga-eme ihe ahụ bụ́ obi ya. (Aịzaya 45:18) Ọ ga-emecha meere ụmụ mmadụ ihe ahụ ọ chọrọ imere ha ná mmalite.—Gụọ Abụ Ọma 37:11, 34.
Ebe ọ bụ na Chineke chiri Jizọs Eze, Jizọs ga-eji ikike o nyere ya mee ka ụwa a ghọọ paradaịs. N’agha Amagedọn, Jizọs ga-akpọrọ ndị mmụọ ozi bịa gbuo ndị niile na-anaghị erubere Chineke isi. Ya gbuchaa ha, ya atụọ Setan mkpọrọ otu puku afọ. N’agha ahụ, a gaghị egbu ndị na-erubere Chineke isi n’ihi na Jizọs ga-echebe ha ka aka ghara ịkpa ha. Ha ga-adị ndụ ebighị ebi n’ụwa a mgbe ọ ga-aghọ Paradaịs.—Gụọ Mkpughe 20:1-3; 21:3, 4.
Olee mgbe Chineke ga-akwụsị ihe ọjọọ niile dị n’ụwa? O nwere ihe ndị Jizọs kwuru na ọ bụrụ na ha emewe, anyị amara na ọgwụgwụ ụwa ọjọọ a eruwela nso. Ọ bụ ihe ndị ahụ o kwuru ka Baịbụl kpọrọ “ihe ịrịba ama.” Ihe ndị na-eme n’ụwa ugbu a na-akpa ụmụ mmadụ aka ọjọọ. Ha na-egosikwa na anyị bizi ‘n’ọgwụgwụ usoro ihe a.’—Gụọ Matiu 24:3, 7-14, 21, 22.
N’ime otu puku afọ ahụ Jizọs ga-achị ụwa, ọ ga-eme ka ụmụ mmadụ kwụsị ịta ahụhụ. (Aịzaya 9:6, 7; 11:9) Jizọs agaghị abụ naanị Eze, ọ ga-abụkwa Nnukwu Onye Nchụàjà. Nke ahụ pụtara na ọ ga-akagbu mmehie niile ndị hụrụ Chineke n’anya mere. N’ihi ya, Chineke ga-esi n’aka ya mee ka ọrịa, ịka nkà, na ọnwụ ghara ịdị ọzọ.—Gụọ Aịzaya 25:8; 33:24.
Ndị na-erubere Chineke isi ga-ebi na Paradaịs. (1 Jọn 2:17) Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa chọọ ndị dị nwayọọ n’obi ma kụziere ha ihe ha ga-eme ka ha na Chineke dịrị ná mma. Taa, Jehova na-akụziri ọtụtụ nde mmadụ ihe ga-enyere ha aka ịdị ndụ ebighị ebi n’ụwa a mgbe ọ ga-aghọ Paradaịs. (Zefanaya 2:3) N’Ụlọ Nzukọ Alaeze Ndịàmà Jehova, a na-akụziri ndị mmadụ otú ha ga-esi bụrụ ezigbo ndị di na ezigbo ndị nwunye, nakwa otú ha ga-esi bụrụ ezigbo ndị nne na nna. Ụmụaka na ndị mụrụ ha na-anọkọ mụọ ihe ha ga-eme ka ha rite uru n’ozi ọma a si n’aka Chineke.—Gụọ Maịka 4:1-4.
mailto:?body=Gịnị Ka Chineke Bu n’Obi Kee Ụwa Anyị A?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012187%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka Chineke Bu n’Obi Kee Ụwa Anyị A?